Biogaz vita avy amin’ny tain’omby Azo avadika arina sy kitay fandrehitra
Barika miisa 12, fantsona manodidina ny 50 metatra ary fatana natokana ho an’i Biogaz izay fitaovana mitentina 1 200 000 Ariary eo ho eo no ampiasaina hanamboarana ny biogas vita amin’ny tain’omby araka ny voka-pikarohana nataon’i Herimiarana Ricky. A
vy any amin’ny faritra Itasy distrikan’i Soavinandriana kaominina Mananasy fokontany Tsitakondaza ny tenany ary tanjona ny mba hahatakaran’ny sarababem-bahoaka ity Biogaz tsy manimba tontolo iainana ity. Nanambara ihany koa ny tenany fa hiezaka hamatsy ny fokontany misy azy sy ny manodidina ary hanitatra izany any amin’ny faritra maro samihafa. Raha mihoatra amin’ny arina dia mitovy ihany ny fotoana lany amin’ny fandrahoana sakafo amin’ny fampiasana ny Biogaz avy amin’ny tain’omby saingy tombony ny tsy fandotoana tanana sy vilany ankoatran’ny tsy fanimbana tontolo iainana. Tsy mila kopahana tahaka ny saribao ihany koa ary tsy misy setroka ny fampiasana ity tain’omby hamokarana angovo andrahoina sakafo ity. Tao anatin’ny 4 taona no nanaovana ny fikarohana nahazoana ny vokatra ary nofidiana manokana ny tain’omby amin’ny maha-tontolo ambanivohitra ny toerana sady tsy andoavam-bola ihany koa.